बेपत्ता बनाइएकी सुजिताको शव शौचालयको ट्याङ्कीमा भेटियो, ससुरा-देवरको मिलेमताेमा हत्या ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
बेपत्ता बनाइएकी सुजिताको शव शौचालयको ट्याङ्कीमा भेटियो, ससुरा-देवरको मिलेमताेमा हत्या !
प्रदेश नं २ स्थित महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका ७ भ्रमरपुराकी २६ वर्षीया सुजिता ठाकुर शव शौचालयको ट्याङ्कीमा फेला परेको छ ।
एक महिनाअघि बेपत्ता बनाइएकी सुजिताको शव आइतबार शौचालयको ट्याङ्कीमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।प्रहरीले विशेष सुराकीका आधारमा निर्माणाधीन पेट्रोल पप्पको शौचालयको ट्याङ्कीमा फलिएको शव फेला पारेको हो । शव फालेर ट्याङ्कीमाथि प्लास्टर गरिएको थियो । सुराकीपछि प्रहरीले प्लास्टर फुटाएर शवको खानतलासी गरेको थियो ।
सुजिताको जेठ २० गते देवर, ससुरा, देवरानीसहितको संलग्नतामा हत्या भएको आरोप छ । सुजिताको घर पक्षले भने सुजिता अन्य परपुरुषसँग भागेको भन्दै आएका थिए । माइत पक्षले भने सुजिताको हत्या भएको दाबी गरेर छानविन गर्न माग गरेको छ । तर माइती पक्षको मगलाई प्रहरीले वास्ता गरेको थिएन ।
घटनाको अनुसन्धान गर्न अधिकारकर्मी गुन्जा राय र सामाजिक अभियन्ता सरोज राय पनि प्रहरीसँग आग्रह गरेका थिए । तर, महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्यले आफूहरुको आग्रहलाई नमाने पछि मधेसी आयोग र महिला अधिकार आयोगमापनि घटनाको छानविनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन निवेदन पठाएका थिए ।
त्यतिबेला करिब ५ फिट खाल्डो खनेपछि केश, कपडा र शरीर लगाउन प्रयोग गरेको केमिकल भेटियो । सोही दिन प्रहरीले सुजिताको हत्या आरोपमा देबर रुपेश र श्रीमान् मुकेशलाई नियन्त्रणमा लियो । अहिले दुबैजना प्रहरी हिरासतमा छन् ।सुजिताका श्रीमान सुस्त मनस्थितिका छन् ।
प्रहरीले पटक-पटक रुपेशलाई सुजिताको शव लुकाएको ठाउँ देखाउन भनेका थिए । तर तीन दिन अघि रुपेशले शव गाडेको भनिएको ठाउँ देखाए । तर थप प्रमाण् फेला परेन ।
सुरुदेखि नै महोत्तरी प्रहरीमाथि आशंका गरेका अधिकारकर्मी गुन्जा र सामाजिक अभियन्ता सरोजले नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डिआइजी उमेश रञ्जितकारसँग सुक्ष्म अनुसन्धानका लागि गुहारे ।
डिआइजी रञ्जितकारले घटनाको अनुसन्धान गर्न डिएसपी ज्ञानकुमार महतोलाई परिचालन गरे । उनले सुजिताको शव शौचालयको ट्याङ्कीमा लुकाएको सुराक पत्ता लगाए । त्यहीं सुराकीका आधारमा खोजी गर्दा आज सुजिताको शव फेला परेको हो ।
सुजिता हत्याको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर दाइजो र सम्पत्तिको लोभ नै हत्याको कारण रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
श्रीमान सुस्त मनस्थितिका भएकाले अन्य पुरुषसँगको हिमचिम पनि हत्याको कारण हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।सुजिताको हत्यापछि छोरा–छोरीको विचल्ली भएको छ ।
बकर इद पर्वले सांस्कृतिक विविधताबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्छ : प्रदेश प्रमुख
प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख डा. राजेश अहिराजले इद-उल-फितर अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ अवसरमा
सिरहामा बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, १३ यात्रु घाइते
प्रदेश नं २ स्थित सिरहाको जिरोमाइल-बडियारपट्टी सहायक सडकअन्तर्गत धनगढीमाई नगरपालिका–५ सन्तनगरमा गए राति यात्रुबाहक बस
सबै धर्मको सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै प्रदेश प्रमुख अहिराज पुगे प्रार्थनाका लागि मस्जिदमा
प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख डा.राजेश अहिराज आज महोत्तरीको मटिहानी रोज्जा मजारमा पुगेर प्रार्थना
सप्तरीमा नहर भत्किँदा ५ सयभन्दा बढी घर डुबानमा, जनजीवन प्रभावित
प्रदेश नं २ स्थित सप्तरीमा सबैभन्दा पुरानो नहर भत्किदा ५ सयभन्दा बढी घर डुबानमा परेको
प्रदेश २ : प्रदेश प्रमुख अहिराजद्वारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण, दुई वटा फिर्ता
प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजले हिजो बिहीबार दुई विधेयक प्रमाणीकरण